पत्रकार आचारसंहितालाई संघीय संरचना अनुरुप बनाउन सुझाव - Hamar Pahura
5 Jul 2022 | मंगलबार, आषाढ २१, २०७९
पत्रकार आचारसंहितालाई संघीय संरचना अनुरुप बनाउन सुझाव
शनिबार, आषाढ २५, २०७३ १५:५०:०३
काठमाडौं, असार २५ गते । जारी हुने तयारीमा रहेको पत्रकार आचारसंहिता २०७३ लाई संघीय संरचनाअनुसारको बनाउन सरोकारवा पक्षहरुले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि आचारसंहितालाई केन्द्रीकृत बनाउँदा सान्दर्भिक नहुने धेरैको सुझाव छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामाथिको छलफलमा सरोकारवालाले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आचारसंहितालाई काउन्सिलको एकल तयारीमा भन्दा पनि पत्रकार महासंघसँगको सहमति र सहकार्यमा संयुक्तरुपमा जारीगर्न विज्ञहरुको सुझाव छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले यसअघि मस्यौदा गरेको आचारसंहितालाई देशव्यापीरुपमा पत्रकारसँग छलफल गरेपछि सुझावमा महासंघसँगको सहकार्यमा संहिता तयार हुनुपर्ने धारणा आएको थियो । सोही सुझावलाई मध्यनजर गरी काउन्सिलले महासंघसँग सहकार्य गरी मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन काउन्सिल र महासंघका पदाधिकारी रहेको संयुक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा काउन्सिलबाट अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, बोर्ड सदस्य किशोर श्रेष्ठ र सुदर्शन आचार्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै महासंघबाट अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष खीलबहादुर भण्डारी, अनिता विन्दु, महासचिव उजीर मगर र सचिव प्रभात चलाउने सदस्य हुनुहुन्छ । आठ सदस्यीय सो कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिमरुप रुप दिएपछि त्यसमाथि थप सुझाव लिन काउन्सिलले शुक्रबार विज्ञहरुकोसँगको छलफल आयोजना गरेको थियो ।
सो छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै संविधानविद कांशीराज दाहालले अन्यमुलुकको आचारसंहिताको रुप संक्षिप्त रहने गरेपनि नेपालको आचारसंहिता तुलनात्मकरुपमा विस्तृत हुनेदेखिएको बताउनुभयो । आचारसंहिताको स्वामित्व मिडियाले नै लिनुपर्ने र मिडियाकैलागि निर्माण हुने हुनाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली मिडियालाई पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि त्यही हो उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार डा. कुन्दन अर्यालले मिडियापिच्छे आचारसंहिताको आवश्यकता रहेको भएपनि त्यस्तो परिपाटीको विकास नेपालमा अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्णजस्ता ठूला मिडियाले प्रकाशनगृह भित्र फरक फरक आचारसंहिता निर्माण गर्दा अझै मिडियालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले आचारसंहितालाई काउन्सिलको एक्लो प्रयासमा भन्दापनि महासंघसँगको सहमति र सहकार्यमा जारीगर्न सुझाव दिनुभयो । महासंघ आम पत्रकारको साझा संगठन भएकाले त्यससँग सहकार्य र सहमति गरेर जारीगर्दा त्यसको कार्यान्वयन र अपनत्वबोध हुने उहाँको बुझाई छ । संघीय संरचनामा देश गएकाले त्यसअनुरुप संहिता तयार हुन आवश्यक रहेको सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकार महासंघसँगको सहकार्य र सहमतिकै लागि कार्यदल गठन गरेर मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा पत्रकार र मिडियाको संख्या बृद्धि भएपनि पत्रकारको गुणात्मकता बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले महासंघसँगको सहकार्यमै पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि सम्भव रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकारितामा देखिएको विकृति र विसंगतिको अन्त्यगरी स्वस्थ समाज निर्माण गर्न आचारसंहिताको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रेसकाउन्सिलको भूमिकालाई सचेत गराउनमै सीमित राख्ने कि दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने सम्मको व्यवस्था गर्ने विषयमा सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले कति पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभयो । नियतबस उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो सजाय र भूलबस भएकोलाई कस्तो सजाय भन्ने समेत आचारसंहितामा खुलेर आउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा पूर्व महासचिव ओम शर्माले देश संघीयतामा गएकाले आचारसंहितामा त्यसको तस्विर आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उजुरी परेपछिमात्रै अनुगमन गर्ने काउन्सिलको परम्परागत मान्यताको अन्त्यगरी जतिबेला पनि काउन्सिलले मिडियाको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेको सुनुवाईका लागि विशेष इजलास गठन गर्न पत्रकार आचार्यले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार ईश्वरी ओझा, गुणराज लुइटेल, देवप्रकाश त्रिपाठी, डा. राजेश अहिराज, दिलभूषण पाठक, मोहन सिंह, जुनारबाबु बस्नेत, लक्की चौधरी, नितु पण्डित, प्रवेश आचार्य, अरुण बराल, लगायतले आचारसंहितामा देखिएको त्रुटी र सुधार्नुपर्ने पक्षमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
काउन्सिल र महासंघका पदाधिकारी सम्मिलित कार्यदलले ४८ बुँदे आचारसंहिताको मस्यौदा गरेको छ । अनलाईन मिडियालाई समेत समेटेर तयार भएको आचारसंहिता २०७३ लाई नयाँ आर्थिकवर्षदेखि लागु गर्ने तयारी काउन्सिलले गरेको छ ।
थाकसको रिटमाथि आगामी साउन १८ गते सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाई हुने
चट्याङ लागेर कपिलवस्तुमा सुशीला थारुको मृत्यु
सप्तरीका चौधरी बालुवाटारबाट बेपत्ता, परिवारका सदस्य खोजीमा
मन्त्रीले घुस खानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो : मन्त्री चौधरी
पानी परेपछि कैलालीको मध्य–पूर्वी क्षेत्रका किसानलाई ठूलो राहत
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख (पूर्णपाठसहित)
थाकसद्वारा दायर रिटको सुनुवाई हुन सकेन, अर्को सुनुवाई आउने सोमबार
सरकारलाई विपक्षी बनाई थाकसद्वारा दायर रिटको सुनुवाई शुक्रबार हुँदै
रामपुर गाउँको प्रसिद्ध बेहडाबाबा धार्मिकस्थलमा दर्शनार्थीहरुको घुइँचो
वर्दिया घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न थारु आयोगको माग
हमार पहुरा डट कम काठमाडौं, असार २० गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाक...
हमार पहुरा डट कम कपिलवस्तु, असार १८ गते । कपिलबस्तुमा धान रोप्ने क्...
हमार पहुरा डट कम काठमाडौं, असार १५ गते । शम्भुनाथ नगरपालिका ४, सीरक...
हमार पहुरा डट कम काठमाडौं, असार १४ गते । नवनियुक्त शहरी विकासमन्त्र...
हमार पहुरा डट कम धनगढी, असार ११ गते । रोपाइँ गरेको खेतमा धाँजा फाटि...
© २०७२ सर्वाधिकार सुरक्षित, हमार पहुरा